10 ဥရောပ၌စနင်းကလစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > အိုက်စလန်သို့သွားပါ > 10 ဥရောပ၌စနင်းကလစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား, အိုက်စလန်သို့သွားပါ
ပင်လယ်သစ်ခွများ, ပင်လယ်, အရောင်တောက်တောက်နေသတ္တဝါ, နှင့်ကမ္ဘာ့အရှင်းလင်းဆုံးရေအချို့, ဤအထဲတွင် snorkeling 10 နေရာများစိတ်ကိုမှုတ်စွန့်စားမှုဖြစ်ပါတယ်. ဤ 10 ဥရောပ၌ snorkeling အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ, မှာအံ့သြဖွယ်မြင်နိုင်ရှိသည် 20 မီတာ. ရေအောက်, နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစိတ် ၀ င်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးအဏ္ဏဝါဘ ၀ အချို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည်.
1. ယူကေတွင်ရေနစ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ: Devon
ကျောက်ကျွန်းမှ London Bridge သို့, Tor Bay ၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်, ဒီမှာ UK မှာအလှဆုံး snorkeling နေရာတစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်. အဝါရောင်တောက်ပသောပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာ anemones, ဂုံး, နှင့်ထူးခြားသော tompot blennies ငါး, သငျသညျလန်ဒန်တံတားတစ်ခုလုံးကို snorkeling ဖြုန်းနိုင်ဘူး.
ယူကေနှင့် Devon သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအများစုသည်သူတို့သည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးရေငုပ်elingရိယာများတွင်တစ်နေရာသို့ခရီးသွားနေသည်ကိုပင်မသိနိုင်ပေ. သို့သျောလညျး, Devon သည်ဗြိတိန်၌ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. လန်ဒန်တံတားအပြင်, Lundy ကျွန်းသည် snorkeling ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်, မီးခိုးရောင်ဖျံနှင့်အတူ, လနှယ်, ကြည့်ဖို့လင်းပိုင်.
2. ပေါ်တူဂီတွင်စနင်းကလစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ: Big Berlenga
ပေါ်တူဂီသည်၎င်း၏အံ့ဖွယ်ကမ်းခြေများကြောင့်ကျော်ကြားသည်, Berlenga Grande ကျွန်းသည်ခြွင်းချက်မရှိပါ. ရုံ 10 Peniche ကနေကီလိုမီတာကွာ, မှတစ်ခုဖြစ်သော 10 ဥရောပရှိအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ် surfing သောနေရာများ, Berlenga သည်အလွန်ကြီးမားသောကျွန်းစုဖြစ်သည်. ဒါဟာပါဝင်သည်3လိုဏ်ဂူ၏သေးငယ်တဲ့ကျွန်းများ, အပြာရေ, နှင့်သင်္ဘောပျက်.
အမှု၌သင်တို့ကိုအံ့သြခဲ့ကြသည်, သငျသညျ snorkeling ဂီယာနှင့်အတူသင်္ဘောပျက်များ၏အထင်ကြီးလေးစားနိုင်ပါတယ်. ထို့အပြင်, ပင်လယ်ငါးကဲ့သို့သောအဏ္ဏဝါသတ္တဝါများ၏အံ့သြဖွယ်အတ္တလန္တိတ်ရေအောက်ကမ္ဘာကြီးကို, သန္တာ, မျက်နှာဖုံးထက်ကျော်လွန်ပြီးမင်းကိုစောင့်နေလိမ့်မယ်. ဤလှပသောareaရိယာကိုအပေါ်စီးမှမြင်တွေ့ရသည့်ရှေးဟောင်း Fort Juan Juan Bautista သည်သင်တက်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏အမြင်တွင်ရှိလိမ့်မည်, တစ်ခုလုံးကိုအတှေ့အကွုံနက်နဲသောအရာကိုထည့်သွင်း.
3. ဆိပ်ကမ်း Cros အမျိုးသားဥယျာဉ်, ပြင်သစ်
နက်ရှိုင်းအထိ 8 မီတာ. အထူး snorkel လမ်းကြောင်း၌တည်၏, သငျသညျဆိပ်ကမ်း Cros အတွက်ရာပေါင်းများစွာငါးဖမ်းမိနိုင်ပါတယ် အမျိုးသားဥယျာဉ်. ဒီအသက်အကြီးဆုံး Marina သဘာဝအရံ ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးရေကူးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. Plage de la Palud သည်သင်၏ snorkeling စွန့်စားမှုကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
ဤစာရင်းရှိအခြားအံ့သြဖွယ် snorkeling သောနေရာများနှင့်မတူဘဲ, ဤတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်6သင်တွေ့သောပင်လယ်သတ္တဝါများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များပါသောသတင်းပေးပို့ခြင်း: အရှေ့အတ္တလန္တိတ်ဒေါင်းအလံ, ခြယ်သ comber, ရှားပါး dusky groupers, နှင့်များစွာသောအခြားရောင်စုံငါး.
4. la Silfra, အိုက်စလန်
တစ်ခုမှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးရေငုပ်နေရာများ, ထင်ရှားသည်မှာ La Silfra သည်ဥရောပရှိမော်ကွန်း snorkeling နေရာဖြစ်သည်. အကြားရေကူး2ဥရောပတိုက်ကြီး, မိသားစုနှင့်အတူ, သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများ, Langjokull ရေခဲမြစ်မှရေအရည်ပျော်သွားသည်, မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်.
Silfra သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရေငုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, အတွက်အံ့သြဖွယ်မြင်သာမှုကြောင့် 100 မီတာ. ရေအောက်အရောင်များ, ကျောက်လမ်းကြောင်းနှင့် coves အကြားရေကူး, ဤဘုန်းအသရေအားလုံးသည်ရက်ယာဗစ်မှတစ်နာရီသာဖြစ်သည်. ရေအလွန်အေးဖြစ်လေ့ကတည်းက, သငျသညျက snorkeling ခရီးစဉ်စာအုပ်ဆိုင်သင့်ပါတယ်, သင့်လျော်သောရေကူးဝတ်စုံ၊.
5. အနီရောင်ကျွန်း, Sardinia, အီတလီ
ကြည်လင်သောယူနန်ပြည်နယ်၏ရေသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော snorkeling အတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်သည်. Sardinia ရှိ Isola Rossa သည်ပျော်စရာ snorkeling အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေရှိသည်: ကြည်လင်သောရေ, ကျောက်ရှုခင်းနှင့်ဥမင်, သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်လိမ့်မည်ဟု Marina ဘဝ, နှင့်သင်၏အသက်ရှုဖမ်းရန်အဖြူသဲကမ်းခြေ, snorkeling အစည်းအဝေးများအကြား.
သငျသညျသေးငယ်တဲ့တံငါသည်ရဲ့ရွာကိုတွေ့လိမ့်မည်, အနောက်မြောက် Sardinia ရှိ Isola Rossa. သန္တာ, ငါး, နှင့်အနီရောင်ကျောက်ဆောင်များနွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော setting ကိုဖြစ်ကြသည်. နေပူအပြင်, သငျသညျရေအားကစားပျော်မွေ့နိုင်ဘူး, ရေအောက်ငုပ်ခြင်း, နှင့်အီတလီကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင် windsurfing. ဒါကြောင့်, ရေစိုခံအိတ်များထုပ်ပိုးရန်သေချာစေပါ, Sardinia ၏ရေအောက်ကမ္ဘာကိုမှတ်မိရန်ရေအောက်ကင်မရာတစ်ခုလည်းရှိသည်.
6. Cabrera ကျွန်းစုအမျိုးသားဥယျာဉ်, စပိန်
19 သေးငယ်တဲ့ကျွန်းများ Cabrera ကျွန်းစုပေါင်းစပ်, အံ့သြဖွယ်အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်၏နေအိမ်, လူသားများကထိတွေ့. ဂူအပြာ, ရေကြောင်းသဘာ ၀ အရံသည်ဥရောပတွင်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သည်, နှင့်သင်၏ snorkeling လေ့လာရေးခရီးအပေါ်, သင်ထက်ပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ် 500 မျိုးစိတ်. ကင်းမြီးကောက်, ရေဘဝဲ, leatherback လိပ်, သင်တွေ့ရမည့်ပင်လယ်သတ္တဝါအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်.
ထို့အပြင်, လှေပေါ်မှလင်းပိုင်အချို့ကိုတွေ့ရဖို့သင်အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်, Cabrera ရန်သင့်လမ်းပေါ်တွင်. စပိန်ကမ်းရိုးတန်းသည်ဥရောပတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနွေရာသီနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့် Mallorca သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားများအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သင့်ရဲ့ swimsuit နှင့် snorkel ဂီယာထုပ်ပိုး, Cabrera သို့မမေ့နိုင်စရာနှင့်အပန်းဖြေခရီးစဉ်အတွက်.
7. Walchensee ရေကန်မြူးနစ်
ကြီးမားသည်, အပြာ, နက်ရှိုင်းသော, အင်းအိုင် Walchensee သည်ဂျာမနီရှိအလွန်ကောင်းမွန်သော Alpine ရေကန်ဖြစ်သည်. 75 မြူးနစ်ကနေကီလိုမီတာ, ဒီ snorkeling ဦး တည်ရာ၌တည်ရှိသည် Bavarian ဒေသ၏ဗဟို. ဒါကြောင့်, သငျသညျလေထုနှင့်ကြွင်းသောအရာတက်သည်အဖြစ်, အဆိုပါ မင်းပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသာယာလှပသောရှုခင်းများ ဘုရားသခင့်အတွေ့အကြုံအတွက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပေးသည်.
5 မီတာမှ 20 မီတာမှာကြီးသောမြင်နိုင်နှင့်အတူ, အင်းအိုင် Walchensee တစ်ခုဖြစ်သည် 10 ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးရေကူးသောနေရာများ. ထို့အပွငျ, သငျသညျသက်တန့်ရောက်ရေချိုငါးများနှင့်ငါးရှဥ့်များထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာနိုင်သည်, ရှင်းလင်းတဲ့ရေကန်ထဲမှာ, သင် Walchensee ရေကန်ထဲမှာရေငုပ်သွားအဖြစ်.
8. သြစတြီးယားနိုင်ငံတွင် River Snorkeling: Viecht Am Traunfall
လူအများစုကသင့်အားမြေထဲပင်လယ်၌ snorkeling လုပ်ခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်, မြစ်ရေငုပ်ခြင်းသည်ထူးခြားသည်. လတ်ဆတ်သောစိမ်းရေအေးအေးဆေးဆေး, အထက်သြစတြီးယား၌တည်၏, Viecht am Traunfall သည်Austriaစတြီးယားတွင် snorkeling အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. Viecht am Traunfall မြစ်သည်လှပသောသန္တာကျောက်များတည်ရှိသည်, နှင့်ဤအလှအပရန်သင့်ခရီးစဉ်တွင်, သင့်ကိုခုန်ချပြီးကျောက်ချောင်းဖိတ်ရန်ဖိတ်ကြားလိမ့်မည်.
ထိုကွောငျ့, သြစတြီးယား Alps မှ snorkeling သည်ဥရောပတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံး snorkeling အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်သည်သင်၏ snorkeling ခရီးစဉ်ပြီးတာနဲ့, စိမ်းလန်းသောတောင်ကုန်းများနှင့်မြစ်မြင်ကွင်းများမှာ ပြီးပြည့်စုံသောပျော်ပွဲစား နှင့်အပန်းဖြေအစက်အပြောက်. ဒီမှာ, သင်ရရှိသောအံ့သြဖွယ်ရေအောက်ရိုက်ချက်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည်, လတ်ဆတ်သောတောင်လေလေကိုသြစတြီးယားရှုခင်းတွင်ခံစားပါ.
မက်ဒီးစ်ကျွန်းများသည်လှပသောသဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး del Montgri ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. အန္တိမစပိန်နွေရာသီ ဦး တည်ရာ၌တည်ရှိသည်, ကော့စတာဘရာဗာ, မက်ဒီတို့သည်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရေကြောင်းနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်. သငျသညျအဏ္ဏဝါဘဝအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်, ပြီးတော့ဒီမှာ snorkeling, မမေ့နိုင်သောဖြစ်လိမ့်မည်.
မက်ဒီကျွန်းငယ်လေးကျွန်း, Catalonian ကမ်းရိုးတန်းပေါ်မှာ, အေးစိမ့်သောမြေထဲပင်လယ်နှင့်ဝိုင်းရံထားသောရေငုပ်နေသောပရဒိသုဖြစ်သည်. တကယ်တော့, ကော့စ်ဘရာဗာတွင်အားလပ်ရက်အနားယူစဉ်မက်ဒီးစ်တွင် snorkeling လုပ်ခြင်းသည်ထိပ်ဆုံးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်. ကလေးတွေနှင့်အတူ, မိတ်ဆွေများက, ဒါမှမဟုတ်တစ်ကိုယ်တော်, မက်ဒီတို့သည်လှပသောသတ္တဝါများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်, ပင်လယ်, ပင်လယ်ကြယ်များ, နှင့် barracudas.
10. ဥရောပ၌စနင်းကလစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ: အယ်လ်ဘာအီတလီ
တ ဦး တည်းအခြမ်းအပေါ်အနီရောင် gorgonians, ကမ်းရိုးတန်း၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်သန္တာများရှိသည်, အဲလ်ဘာပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်. Elba ကျွန်းပေါ်ရှိ Sant Andrea ၏ပင်လယ်အော်သည်မည်သည့်ရေအောက်စွန့်စားမှုမဆိုစတင်သည်. ဝေးဆိပ်ကမ်းနှင့်လမ်းလျှောက်, ဒီ Tuscan ကျွန်းရှိအဏ္ဏဝါဘဝအံ့သြဖွယ်ပါပဲ.
လှပသောသန္တာအပြင်, ငါး, နှင့်သတ္တဝါများ, အီတလီကမ်းရိုးတန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, အကယ်၍ သင်သည်ဂူရှာဖွေခြင်းနှင့်နေထွက်ငါးများကိုရှာဖွေခြင်းကြားရှိသင်၏အသက်ရှုခြင်းကိုဖမ်းရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါက, ထို့နောက်အယ်လ်ဘာရဲ့သဲကမ်းရိုးတန်းပြီးပြည့်စုံသောအပန်းဖြေအစက်အပြောက်ဖြစ်ကြသည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ရာရေအောက်ကမ္ဘာများသို့မမေ့နိုင်စရာခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 10 ရထားဖြင့်ဥရောပ၌ရေငုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပ၌ Snorkeling အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ” (1o) အကောင်းဆုံးနေရာကိုသင့်ဘလော့ဂ်ကိုတင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fbest-places-snorkeling-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ရေလုပ်သားဘဝ နေရာများ Snorkeling လုပ်ခြင်း Snorkelingin ဥရောပ ရေအောက်ဘဝ